CAF SA သည်ပြeshနာရှာဖွေခြင်း၊ ရှာဖွေခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်း၊ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးပြုပြင်ခြင်း၊ RayHaber | raillynews
ပင်မစာမျက်နှာလေလံပွဲလေလံရလဒ်များကိုYHT စီမံကိန်းသတ်မှတ်မည်ပြတ်ရွေ့ရှာဖွေတာ - troubleshooting, ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု, ဆန်းသစ်, ကြိုတင်ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းမှု, မှန်ကန်သောထိန်းသိမ်းမှုနှင့်ဝန်ဆောင်မှုက CAF လုပ် SA ပြင်ဆင်နေများအတွက်တင်ဒါအနိုင်ရရှိလိုက်ပြီ
YHT စီမံကိန်းသတ်မှတ်မည်ပြတ်ရွေ့ရှာဖွေတာ - troubleshooting, ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု, ဆန်းသစ်, ကြိုတင်ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းမှု, မှန်ကန်သောထိန်းသိမ်းမှုနှင့်ဝန်ဆောင်မှုက CAF လုပ် SA ပြင်ဆင်နေများအတွက်တင်ဒါအနိုင်ရရှိလိုက်ပြီ
12 / 12 / 2014 လေလံရလဒ်များကို, လေလံပွဲ, အထွေထွေ, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ
TCDD YHT စီမံကိန်းသတ်မှတ်မည်ပြတ်ရွေ့ရှာဖွေတာ - troubleshooting, ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု, ဆန်းသစ်, ကြိုတင်ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းမှု, မှန်ကန်သောထိန်းသိမ်းမှုနှင့်ဝန်ဆောင်မှုက CAF လုပ် SA ပြင်ဆင်နေများအတွက်တင်ဒါအနိုင်ရရှိလိုက်ပြီ
စုဆောင်း 23 အောက်တိုဘာလ 2014 တစ်ရက်ဟာယယဇ်ပူဇော်သဖြင့်တူရကီပြည်နယ်မီးရထား (TCDD) လုပ်ငန်းညွှန်ကြားမှုအထွေထွေ, "122နှစ်ပေါင်းအရေအတွက်ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း, မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းရထားသတ်မှတ်မည်, ကို Maintenance, အလုံးစုံစစ်ဆေးပြုပြင်ဖို့, ကြိုတင်ကာကွယ်မှုကို Maintenance, မှန်ကန်သောကို Maintenance နှင့်ဝန်ဆောင်မှုပြင်ဆင်နေ, သန့်ရှင်းရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဝန်ဆောင်မှုပစ္စည်းဝယ်ယူရေးရေးရာ နုအကဲဖြတ်နှင့်ဆက်စပ်သောအလုပ် "၏ဝယ်ယူနှင့်အတူဝန်ဆောင်မှု၏ဗီဇာအရှည်ပြီးစီးခဲ့သည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဂ္ဂဇင်းလက်ခံရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရ, နူးညံ့သော 30.315.750 ယူရိုCaféလုပ် SA ကုမ္ပဏီတစ်ခုကကဆုံးဖြတ်သည့် 87.915.675 ယူရို (TL Equivalent 18.612.750 ပေါင်) ၏အနီးစပ်ဆုံးကုန်ကျစရိတ်လေလံဆွဲအနိုင်ရရှိခဲ့ပါသည်။ တရားဝင်လုပ်ငန်းစဉ်၏သက်တမ်းကုန်ဆုံးနုစာချုပ်အနိုင်ရသောကုမ္ပဏီရန်ဖိတ်ခေါ်လိမ့်မည်ပြီးနောက်။ ကောင်းစွာလူသိများသည်အဖြစ်အောက်ပါအတိုင်းနုပါဝင်ကုမ္ပဏီများဖြစ်ကြသည်:
1 ။ Alstom
2 ။ Caféလုပ် SA
3 ။ Siemens
ref ။ : ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဂျာနယ် 1204 / 27 2014 အောက်တိုဘာလ (EA) အ
အမြန်ရထားမြန်နှုန်းသတ်မှတ်ခြင်းစီမံကိန်း CAF SA သည်ပြeshနာဖြေရှင်းခြင်းအတွက်တင်ဒါကိုအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အဆင့်ယောဘကို Maintenance Crossing, ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း
JCC ၏မှန်ကန်သောအရေးယူမှုဆုံးဖြတ်ချက်အပြီးတွင်တူရကီ - အစ္စတန်ဘူလ်မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်းဥမင်လိုဏ်ခေါင်း…
မတော်တဆမှုအပြီး နေ့မှစ. TCDD YHT6မိနစ်ပြင်ဆင်ကြပြီ!
အဘယ်အရာကို Ataturk လေဆိပ်မှဖွစျမညျနညျး